| 2-Aminoisoheptane (28292-43-5) HPLC≥98% Buy AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အခြားသူများက / 2-aminoisoheptane (28292-43-5)
SKU: 28292-43-5. အမျိုးအစား: အခြားသူများက
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ 2-Aminoisoheptane (28292-43-5) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
2-Aminoisoheptaneလည်း DMHA သို့မဟုတ် Octodrine အဖြစ်လူသိများ, 2017 ရဲ့ start ကတည်းကကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အဆီ burners တွေကအတွက်လူကြိုက်များတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာ levels.2-Aminoisoheptane ဖွဲ့စည်းပုံ DMAA ရန်အလွန်ဆင်တူသည်သင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုတိုးတက်စေရန်ယုံကြည်သည်ရဲ့တစ်လှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသဘာဝအင်္ဂလိပ် walnut သစ်ပင် (AKA ။ Juglans Regia) ၏အခေါက်အတွင်း၌တွေ့ရှိရမယ့် ... ။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ: DMHA, Octodrine
2-Aminoisoheptane အသစ်တစ်ခုလှုံ့ဆော်ပုံမှန်အားဖြင့်အဆီ burners တွေကအတူကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းဖြည့်စွက်အတွက်အသုံးပြုသည်အဖြစ်။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စွမ်းအင်တိုးတက်မှုနှင့်နှိပ်ကွပ်စာစားချင်စိတ်ကို၎င်း၏အကြံပြုချက်များကို dual အကျိုးသက်ရောက်မှုများအားလုံးပါပဲ။
2-aminoisoheptane (Octodrine) လျှင်မြန်စွာစွမ်းရည်မြှင့်တင်က၎င်း၏စွမ်းအင်နှင့်ခံစားချက်အဘို့အလူကြိုက်များသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းထဲကအများဆုံးရသေချာသည်ဟုအများအပြားအရည်အသွေးတွေရှိပါတယ်ကတည်းကဒါက preworkout ဖြည့်စွက်ကြောင့်အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များစေတော်မူပြီ: (! လွယ်ကူကိုမီးရှို့ပိုပြီးကယ်လိုရီ, ဆိုလိုတာကကိုယ့်ကိုယ်တွန်းနှင့်ပိုပြီးရွှေ့ဖို့အောင်) စွမ်းအင်အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်, တိုးမြှင့လှုံ့ဆျောမှု (သင်ထွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးလျှင်စွမ်းအင်အများကြီးဘာမှမဆိုလို), နှင့်သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းစဉ်နှင့်အပြီးအကောင်းခံစားရသည့်အခါတိုးတက်လာသောခံစားချက် (- အဲဒါကိုပိုပြီးသင်သည်ပြန်လာအပေါင်းတို့နှင့်တကွကျော်ပြုမည်စေသည် နောက်တဖန်) ။ တချို့ကသည်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများကို သာ. ကြီးမြတ်နာကျင်မှုသည်းခံ 5,6 ပါဝင်သည်, ရိပ်မိခေတ္တခဏ 5,6 ၏နှုန်းမှာလျော့နည်းသွားနှင့် bronchodilation 3b, 4b, 5b တိုးတက်အောင် - အလေးရုတ်သိမ်းရေးသည့်အခါတစ်ဦးလှည့်ဖျားသို့မဟုတ် HIIT လူတန်းစား, ဒါမှမဟုတ်ပင် wrangling လေးတွေနှင့်တအိမ်လုံးပြည့်မှတဆင့် powering, နေရာလေးကိုအတွက်လာရာ အိမ်မှုဝေယျာ။
2-aminoisoheptane (Octodrine) နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာဤအကြိုးကြေးဇူးမြားက၎င်း၏မော်လီကျူးတည်ဆောက်ပုံမှအစာရှောင်ခြင်းကျေးဇူးတင်စကားအတွက်ကန်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ရေတွင်ပျော်ဝင်နှင့် lipid-ပျော်ဝင်နှစ်ဦးစလုံးကိုအရာ - ထို alpha ကာဗွန်အပေါ်တစ်ဦး methyl အုပ်စုတစ်စု၏ထို့အပြင်ဝင်း၏ amphiphilic သဘောသဘာဝတိုးပွားစေပါသည်။ တိုးမြှင့် lipid နိုင်မှုသိသိသာသာ၎င်း၏အာရုံ-တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ် effects.8,9 ကွိုးစားအားထုတျနိုငျရှိရာထိုအသွေးကိုဦးနှောက်အတားအဆီးဖြတ်သန်းရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုတိုးပွါး
2-aminoisoheptane (Octodrine) ကိုလည်းကြောင့်အစာစားချင်စိတ်လျော့နည်းကျဆင်းသင်တို့ကဲ့သို့ 4b "ကောင်းသောခံစားရတယ်" အောင်များအတွက်တာဝန်ရှိသည့်ဟော်မုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်သင့်စိတ်ဓါတ်များတိုးတက်လာဖို့က၎င်း၏စွမ်းရည်မှကိုယ်အလေးချိန်မြှင့်တင်ရန်ကူညီနိုငျသညျ, 5b (နှုတ်ဆက်ပြောစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မူးရူးအစည်းအဝေးများနှင့် နှိမ့်ချ feeling!) ။
အကျိုးခံစားခွင့်တိုးမြှင့် 2-aminoisoheptane (Octodrine) 's ကိုစိတ်ဓါတ်များပိုမို Euphoria ပီတိနှင့် wakefulness.3b, 4b, 5b, 6b တာဝန်ရှိသည်နေသော dopamine နဲ့ norepinephrine အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်မှရပ်တ။ ဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပုံစံတူစာပိုဒ်နှင့်ဂန္ထဝင် monoamine neurotransmitters မှဇီဝြဖစ်ဆက်စပ်, 2-aminoisoheptane (Octodrine) ယာယီ presynaptic အာရုံကြောသို့ dopamine နဲ့ norepinephrine ၏ reuptake တားဆီးနေစဉ်, သဲလွန်စ Amin ဆက်စပ်အဲဒီ receptor 1 ကိုသက်ဝင်နိုင် - က၎င်း၏ "လာကြတယ်" နှင့်ကြာရှည်ခံနိုင်စွမ်းတိုးတက်အောင်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, DMHA ၏အသုံးပြုသူများသည်အရှင်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ workouts.2-aminoisoheptane ကနေအများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့် (Octodrine) ရဖို့ရန်ခွင့်ပြုမှာလည်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်မှု induces တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားနာကျင်မှုတံခါးခုံခြင်းနှင့်လျှော့ချပင်ပန်းနွမ်းနယ်အစီရင်ခံခဲ့ကြသည်။ ပြီးသားဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း DMHA dopamine များလွှတ်ပေးရန်အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Dopamine အဆင့်ဆင့်လှုံ့ဆျောမှုအဆင့်ဆင့်နှင့်နောက်ဆက်တွဲပြုမူမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ လှုံ့ဆျောမှုပြုမူမှုအတွက်ကတိကဝတ်နေစဉ်တစ်စုံတစ်ခုပြီးမြောက်ဖို့လိုရှိ၏။ တစ်ဦးကလူတစ်ဦးတစ်ခုခုအောင်မြင်ရန်ဆန္ဒပြုနိုင်ပါသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့လမ်းတစ်လျှောက်အတားအဆီးကြုံတွေ့ရလျှင်, သူတို့အရှုံးမပေးစေနိုင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပြုမူမှုရှိပါတယ်လျှင်သူတို့လုပ်ဖို့ထွက်သတ်မှတ်ထားသောအရာကိုအောင်မြင်ရန်သည်အထိသို့သော်, ထို့နောက်သူတို့အကြောင်းမရှိထံမှအလြှော့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်စရာ, အဘယ်သူ၏လွတ်မြောက်ရေးအတွက် DMHA ၏စားသုံးမှုအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည် dopamine, သင်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်သင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရေးအတွက်ဖို့ပြုမူမှုနှစ်ဦးစလုံးရှိတယ်သေချာ။
DMHA စွမ်းဆောင်မှုကိုအခြေခံပြီး, Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အချိုရည်အမျိုးမျိုးအတွက်၎င်း၏တိုးမြှင့်ပါဝင်မှုဤအရပ်, လေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်အဆုံးစွန်ထောက်ခံမှုများကိုသုံးတဲ့အခါဆိုးကျိုးပေါင်းစပ်ခံစားခဲ့ရသညျ။
ဒီပါဝင်ပစ္စည်းများအတွက်ရရှိနိုင်မျှအရာရှိတဦးကထိုးထောက်ခံချက်နေဆဲရှိပါသည်။ ဒါဟာပြီးသားထုတ်ကုန်သို့ blended ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကအသုံးပြုနေသည်မည်မျှကိုဤလှုံ့ဆော်ကုမ္ပဏီများအားပြောပြရန်လည်းခဲယဉ်းသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ 100mg မှ 300 အကြားတစ်ခုခုထားရန်အန္တရာယ်ကင်းအလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်။
အမြဲတမ်း 2-aminoisoheptane တစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီသုံးနိုငျကွောငျးသတိရပေမယ့်နေ့ကိုတလျှောက်လုံးကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကလှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဒါဟာသင့်ရဲ့ပုံမှန်အိပ်ပျော်နေတဲ့ရစ်သမ်နှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိပ်ရာဝင်ချိန်ရှေ့မှာသုံးပြီးရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားပါ။
2-aminoisoheptane (DMHA) ၏ဂုဏ်သတ္တိများတိုးမြှင့်စွမ်းဆောင်ရည်၏အားသာချက်ယူပါကကြိုတင်ထွက်အလုပ်လုပ်မှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 15-30 မိနစ်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုသည်။ ယင်း၏အစာစားချင်စိတ်ဖိနှိပ်ဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်အများစုအသုံးပြုသောလျှင်တနည်းအားဖြင့်, 2-aminoisoheptane (DMHA) အစားအစာအကြားတစ်နေ့တာအတွင်းသုံးနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်အိပ်ရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုဆီးတားဖို့အလားအလာရှိပါတယ်အဖြစ်သို့သျောကြှနျုပျတို့နှောင်းပိုင်းမွန်းလွဲပိုင်းတွင်သို့မဟုတ်အစောပိုင်းညနပေိုငျး၌ဤပစ္စည်းကို အသုံးပြု. လျှင်သတိထားယူပြီးအကြံပြုပါသည်။
ဘယ်လို 2-aminoisoheptane အကျင့်ကိုကျင့်
2-Aminoisoheptane (DMHA) ကိုလူကြိုက်များ DMAA ရန်အလွန်ဆင်တူထုံးစံ၌အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေ 2-Aminoisoheptane (DMHA) 's ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအေးဂျင့်လွှတ် monoamine အဖြစ်လူသိများကြသည်။ ဤရွေ့ကားအချို့ monoamines ၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်၏စွမ်းရည်ရှိသည်သောဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကား dopamine နဲ့ noradrenaline ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာတစ်ပြိုင်နက်သဲလွန်စ Amin ဆက်စပ် receptor.This ၏ activation မှတဆင့် reuptake နှေးကွေးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူတို့ရဲ့ receptors ရှည်တက်ကြွသောဤ monoamines စောင့်ရှောက်ဖို့သူတို့ရဲ့ binding နိုင်စွမ်းရပ်နေစဉ် dopamine နဲ့ noradrenaline လွှာမှတိုးမြှင်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ သင်တစ်ဦးမဟုတ်တော့တည်တံ့, အကျိုးသက်ရောက်မှုနှိုးဆွကြပါပြီဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ DMAA နှင့် 2-Aminoisoheptane (DMHA) အကြားကိုတှေ့မွငျနောက်ထပ် Commons monoamine oxidase (Mao) ၏သက်ရောက်မှုကန့်သတ်သော alpha ကာဗွန်အပေါ်တစ်ဦး methyl အုပ်စုတစ်စု၏ထို့အပြင်ဖြစ်ပါသည်, ထို amphiphilic ဒီပါဝင်ပစ္စည်းများ၏သဘောသဘာဝ, အဖြစ် catecholamines ၎င်း၏ဆှဖှေဲ့တိုးပွါး ဒီ transporters.What ဝင်းရဲ့ထက်ဝက်ဘဝကိုပိုရှည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး, သူကထိုအသွေးကိုဦးနှောက်အတားအဆီးမှတဆင့်အများကြီးပိုလွယ်သွားတော်မူမည်, ထိုသို့ခြုံငုံကြီးမြတ်သော stimulatory အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာမည်ကိုဆိုလိုသည်။
အဆိုပါနောက်ဆုံးပေါ်စိတ်ကြွဆေး 2016 အတွက်ကာယဗလနယ်ပယ်ထဲကလာ! ဒါဟာစွမ်းအင်မြှင့်တင်ရန်နှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုနှိမ်နင်းရန်နောက်ဆုံးပေါ် DMAA အခြားရွေးချယ်စရာ 2-aminoisoheptane ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနှစ်သစ်ကူးအကြိုလေ့ကျင့်ခန်း stimulator ကာယဗလနှင့်အားကစားသမားများထောင်ပေါင်းများစွာ၏များ၏အာရုံစိုက်ဖြစ်လာသည်။
ဤတွင် 2-aminoisoheptane အတူအလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရဲ့:
2-aminoisoheptane ကုန်ကြမ်း Powder
2-aminoisoheptane အားကစားအာဟာရစျေးကွက်မှအသစ်ဖြစ်၏ကတည်းကမျှဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများကဖော်ပြခဲ့သည်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ DMAA ကနှိုင်းယှဉ်စေနိုင်သည်။ အလားတူမလိုလားအပ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများ 2-aminoisoheptane ဥပမာ, မြင့်မားသောနှလုံးခုန်, မြင့်မားသောသွေးကြောဖိအားနဲ့အခက်အခဲအသက်ရှူ၏မြင့်မားသောဆေးညွှန်းနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ပေလိမ့်မည်။ ရုံဆိုလှုံ့ဆော်လိုပဲကအစိတ်အပိုင်းရန်သင့်သည်းခံစိတ်နှင့် sensitivity ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမယ့်အနိမ့်ထိုးနှင့်အတူစတင်အကောင်းဆုံးပါပဲ။
AASraw ထံမှ 2-aminoisoheptane ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
2-aminoisoheptane ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း